नेपालमा सञ्चालित १५ विदेशी शैक्षिक संस्था खारेज,कुन-कुन परे ? (सूचीसहित) - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
नेपालमा सञ्चालित १५ विदेशी शैक्षिक संस्था खारेज,कुन-कुन परे ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । सरकारले विदेशी लगानीमा अवैधरुपमा सञ्चालनमा रहेका १५ निजी विद्यालयलाई खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नेपालमा चलिरहेका कलेजहरुले प्रक्रिया नै पूरा नगरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्दै खारेजी गर्ने तयारी गरेको बताएका हुन् ।
सच्चिनको लागि १५ दिनभित्र प्रक्रियामा आउन सरकारले अल्टिमेटम दिएको छ । मन्त्री पोखरेलले प्रक्रियामा नगएका ती संस्थाहलरुलाई १५ दिनभित्र प्रक्रियामा आउन निर्देशन दिए पनि उनीहरुले अटेर गरेपछि खारेजीको तयारी गरेको बताए ।
‘हामीले एक पटकलाई मौका नदिइ खारेज गर्न मिल्दैन’ बिहीबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६’ जारी गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पोखरेलले भने , ‘१५ दिनभित्र पनि प्रक्रिया नगरे खारेज गर्छौँ ।’
काठमाडौं बाहिरको वुटवलको स्काइ इन्टरनेशनल कलेज र वेस्टर्न मेगा कलेज, धनगढीको वेस्टर्न इनटरनेशनल विज्नेस स्कुल तथा पोखराको कसमस इन्टरनेशनल कलेज र गण्डकी बोर्डिङ हाइअर सेकेण्डरी स्कुल रहेका छन् ।
निकुञ्जबाट निस्किएको गैंडाको आक्रमणबाट एकको मृत्यु
फागुन ६ । चितवन, चितवनको माडीमा गैंडाको आक्रमणमा बुधबार बिहान एकजनाको मृत्यु भएको छ । माडी नगरपालिका– ५ […]
दाङ । लमही बजारछेउमा चारतले ठूलो घरमा डेढ महिनाअघि ठूलो बोर्ड झुन्ड्याएर घोषणा गरियो ‘प्रभुको राज्य !’ […]
यो हप्ता नेपाल आइडलमा भोट गर्दा पैसा नलाग्ने
भदौ २१,काठमाडौं । यो हप्ता रियालिटी शो नेपाल आइडलमा भोट गर्दा पैसा नलाग्ने भएको छ । आयोजकले नेपाल आइडलको […]
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री यादवलाई हार्टअट्याक
काठमाडौं । प्रदेश नं २ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश राय यादवलाई हार्टअट्याक भएको छ […]
अब वैदेशिक रोजगारीका लागि एजेन्ट राख्न नपाइने
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि अब म्यानपावर कम्पनीका कर्मचारीबाहेक तेस्रो पक्षले कसैको पासपोर्ट बोक्ने, […]
स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहित गरिनेः प्रम ओली
फागुन ४ । काठमाडौँ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहित गरेर […]